Fikradaha qallafsan - sida looga saaro fikradaha xun ee madaxa?
Fikradaha qarsoodiga ah - xaggee bay ka yimaadaan iyo sida looga takhaluso?
Dhibaatooyinka (obsessions), marka laga reebo kuwa caadiga ah, "qulqulaya" maskaxda bini'aadamka, waxay ku garaacdaa xaydaanka, xitaa waxay cabsi qabtaa. Inta badan, xaaladdan waxaa weheliya niyad-jabka niyadda, nacaybka, dambiga, iyo la socoshada fikradaha adag ee adag, dhakhtarrada maskaxdu waxay qabtaan jirrado khasab ah.
Waa maxay qodobbada?
Marka ugu horeysa ee cudurka, fikradaha qallafsan waxay muujinayaan xaalado adag, shucuur ahaan qaali ah, tusaale ahaan, ka hor inta muuqata dadweynaha iyo taariikhaha muhiimka ah, shaqo cusub. Muddo ka dib, cudurka "xannibaya" xaaladaha caadiga ah ee caadiga ah iyo qofku wuu xasuusan karaa maalinta oo idil haddii uu ka soo daahay keli ahaan ama birta. Ujeedada bayoolajiga ah ee fikradaha qallafsan waa inay xasuusiso wax, laakiin marka qofka uu ku dhaco saameyn ku yeelanayo cilladda cudurka, ayaa ah mid aan fiicnayn iyo caadifad ahaanta ah.
Calaamadaha feker-xumada ayaa dhacaya marka isku-darka dhawr waxyaalood oo isugeyn ah, tusaale ahaan - nolol-xumo ba'an, oo ay weheliso daciifinta nidaamka dareenka. Obsessions waxaa badanaa la barbardhaa xanjo - waxay "buuxinayaan" maskaxda, waxay u shaqeeyaan si tartiib ah oo aan daahfuran lahayn. Si loola dagaallamo "xanjo maskaxeed" dadku waxay la yimaadaan noocyo badan oo caado ah, tusaale ahaan, buraashid, waxay aaminsan yihiin. Si kastaba ha noqotee, in laga takhaluso fikradaha isdaba-joogga ah ee dadaalka rabitaanku waa wax aan macquul ahayn - tani sidoo kale waa mid ka mid ah calaamadaha xaaladda.
Fikradaha cakiran - sababaha
Si aad u fahamto meesha fikradaha qallafsan ee ka imanaya, dhakhtarrada cilmi-nafsiga waxay aqoonsadeen tiro ka mid ah arrimaha bayoolojiga iyo kuwa neerfayaasha ah ee keenaya soo bixitaanka:
anomalies ee dhismaha iyo shaqada maskaxda;
guul darrooyinka isweydaarsiga neurotransmitters, yaraanta dopamine, serotonin, noradrenaline;
isbeddellada hiin-ga hiin-geedka ah ee loo wareejiyo serotonin;
syndrome PANDAS - saameynta streptococci;
xaaladaha cudurka psychotraumatic joogtada ah;
joojinta nidaamka dareemayaasha;
cudurrada dhimirka qaarkood - suuxdinta, shisoofrani, khamriga.
Noocyada fikradaha aan caqli-gal ahayn
Dhammaan kala-duwanaashaha kala duwan ee kala duwan ayaa adag in la tilmaamo oo la kala saaro. The ugu saxsan oo dhamaystiran waxaa sameeyey Yasper, kuwaas oo u qaybiyay fikradaha cakiran ee laba kooxood oo waaweyn:
Baaxad-gaarsiinta - maaha walbaha walaac, nabadgelyo ahaan. Waxay ka mid yihiin arithmomania - rabitaanka lagu xisaabinayo wax kasta, rabitaanka ah inay jajabiso jumlada ereyada, erayada - calaamadaha, caado-u-sheegidda xusuusinta waxyaabo kale.
Dhibaatooyinka ka soo horjeeda ayaa ah fikrado sheegaya dareen cabsi . Kuwani waxay ku jiri karaan fikrado naceyb ah, shaki ku saabsan ficilkooda, cabsida ah in wax qalad ah ay sameeyaan, rabitaanka ah inay sameeyaan ficilo ficil ah, waayo-aragnimada xanuunka ee hore, ee bukaanku ku noolyahay marar badan, beddelka shakhsigu meel galaan ah.
Sidee loola noolaadaa fikradaha cakiran?
Dadka loola jeedo fikradaha isdabajooga ayaa loo qeybin karaa dhowr qaybood:
"Rootiga Raccoon" waa shakhsiyaadka lagu silciyo cabsida infakshanka, caabuqa, si aaney u dhamaystirin, nadiifin iyo jeermiska.
"Pedants" - dadka ku dadaalaya amar caadi ah, isku xigxig cad, dhammaantood waxay ku dheehan yihiin, midabada, astaamaha, iwm.
"Dib-u-noqoshada" - shakhsiyaadka ka baqaya halis halis ah, si joogto ah u hubi qalabka, gaaska, albaabada albaabka.
"Atheists" waa dad wax walba oo kaamil ah ka cabsada dembiga.
"Mas'uuliyiinta" - dadku waxay ku qanacsan yihiin baahida loo qabo in la ilaaliyo waxkasta oo soo celiya taariikhdii hore, cibaadadan waxaa loogu talagalay in ay dhibaatada keento.
Dadka lagu cadaadiyo fikradaha iyo cabsida waxay door bidaan in ay doortaan labo hab oo dabeecad ah. Marka ugu horeysa, waxay si ula kac ah u dhaqmaan xitaa cabsida, tusaale ahaan, ka baqidda inay gasho shil baabuur - si ula kac ah u jebiso xeerarka wadada. Kiis labaad, qofku si taxadar leh ayuu uga hortagaa xaaladaha argagaxa leh, xitaa meel u dhow walxaha khatarta ah.
Sidee looga takhalusaa fikradaha xun?
Marka wadahadal gudaha ah oo aan dhamaad lahayn oo qof naftiisa ah uu ugu dambeyntii kor u qaado, wuxuu bilaabaa inuu la yaabo sida loola macaamilo fekerka fekerka. Gaar ahaan tan la yiraahdo "obsessions" waxaa badanaa la socda hurdo la'aan, dystonia , diiqad, walaac, daal daba dheer, weerar argagax. Talaabada ugu horeysa iyo tan ugu macquulsan ee looga takhalusi karo fikradaha qallafsan - nasasho buuxda, marka la doorbido isbedelka muuqaalka. Laakiin haddii taasi aanay ku caawin, waxaad u baahan tahay inaad aragto dhakhtar.
Ma laga yaabaa in lagu daaweeyo fikradaha cakiran?
Daaweynta isku dhafan, oo ay magacaabaan dhakhaatiirta inta lagu guda jiro obessia, waxaa ku jira daawooyinka iyo daaweynta teraabiyada cilminafsiga. Kiniiniyada ugu muhiimsan ee "fekerka fekerka" waa antidepressants: Phenazepam, Relanium, Diazepam, Elenium, Napoton. Dhakhtarka cilminafsiga, oo la shaqeynaya bukaanka, wuxuu ka caawiyaa sidii loo cirib tiri lahaa astaamaha neurotic, si uu u hormariyo caddaadiska, inuu kor u qaado kalsoonidiisa iyo niyadda dareenka. Waxaa loo isticmaalaa in lagu daaweeyo jirada isdifaacida iyo hypnosis.
Dhibaatooyinka - daaweynta daaweynta dadweynaha
Dhibaatooyinka walaaca, wadahadal gudaha ah oo joogto ah qofku si joogto ah ayuu u socdaa, sidaa daraadeed wuxuu inta badan is-weydiiyaa sida looga saaro fikradaha xun ee madaxiisa naftiisa, sida dadka. Si looga doodo codka gudaha ah waa wax aan faa'iido lahayn - fikradaha adag ee had iyo goor soo noqda, badiyaaba "saaxiibo". Si aad uga takhalusto laba arrimood ayaa kaa caawin doonta farsamada oo ka kooban dhowr tallaabo oo isku xiga oo aad naftaada u isticmaali karto:
Tallaabada ugu horreysa waa in la fiiriyo fikradaha isdaba-joogga ah, iyaga oo aan macne u laheyn. Waxaad u baahan tahay inaad baratid si aad u fahamto in aysan taasi ahayn maskaxda, iyo caqabadu waxay keenaysaa inaysan dhicin si loo hubiyo in albaabku xiran yahay.
Tallaabada labaad waxay tahay in la ilaaliyo dareemada ay sababaan colaadaha, khibradda dareenkooda, xataa haddii ay keenaan dareen xun. Haddii aad ku darto fekerka qofku leeyahay dhaqdhaqaaqa qasabka ah, waa lagama maarmaan in laga hortago rabitaanka iyaga. Marxaladdan, waxaad u baahan tahay inaad fahamto in dhammaan "dhaqaalaynta" caadooyinka ah ay yihiin kaliya natiijada ka dhalatay maskaxda.
Talaabada sadexaad waa inaad fiiro gaar ah u yeelatid hareeraha, faahfaahinta ugu yar - tilmaanta, dhawaaqa, iwm. Beddelidda waa wax macquul ah oo loogu talagalay wax soo jiidasho leh.
Si loo fududeeyo marxaladan tallaabooyinkan waxay noqon kartaa caawinta qoryaha dabiiciga ah ee dabiiciga ah (oo leh valerian, chamomile, melissa) iyo jimicsiga neefsiga.
Obsessions - Kiristaanka
Fikrado kasta oo qarsoodi ah oo wadaaddada diinta kiristaanka ahi waxay ka fikiraan shar, Dhibaatada mawduuc kasta ha ahaato, waa wax aan la aqbali karin, waa wax aan la aqbali karin. Masiixiyaddu waxay kugula talinaysaa sida ay ula qabsan lahaayeen fikrado qallafsan, iyagoo isticmaalaya awooda salaadda. Akhriso ducada wakhtiga soo noqoshada caajisku waa inay noqdaan kuwo fekeraya, oo aan degdegin. Nidaamkan kiiskan wuxuu soo saaraa saameyn aan wax ku ool ah lahayn, qofna wuxuu isu beddelaa fikradaha ku saabsan Ilaah.
Sidee nafta loo dejiyaa?
Isku xirnaanshaha baahida xiriirka bulshada
Jinsiga jinsiga - isku dhacyada jinsiga ee bulshada casriga ah
Calaamadaha dariiqa - sida loo maareeyo dariiqa oo aan u noqonin dhibane khiyaano?
Waa maxay anshaxa bulshada ee casriga ah iyo maxay yihiin shaqooyinkooda?
Filimyada cayaaraha ugu wanaagsan
Sidaad u fahmi lahayd inaad jacayl ku dhacday?
Dareenka koowaad ee nin
Cabsida aadka ah
Waa maxay raxmaddu - ma jirtaa wax fiican?
Beeraha lagu qurxiyo
Digsiga karinta gaaska dabka
Cunto cunidda ka dib cunista - sababaha iyo daaweynta habab wanaagsan
Salad leh basasha pickled
Shellado ka timaada geed
Lumbago - sii kordhaya abuurka
Jennifer Lawrence ayaa shaaca ka qaaday sababaha fasaxa ee Darren Aronofsky
U xaqiijinta kalsoonida
Chlorhexidine Shumacyada Uurka
Muuqaalo - Fashion 2015
Fareemka caanaha aan khamiir lahayn
Jeebka caleenta - qalabka calaamadeysan ee loogu talagalay dhar dhaqameedka
Jasiiradaha - Dhacdooyinka Dhacdooyinka 2013